Xidigii Ugu Fiicnaa, Kii Ugu Xumaa & Qiimaynta Ciyaartoyda Kulankii Ay Barca Dubatay Atletico Bilbao %
Goolal ka yimid Paco Alcacer iyo Lionel Messi ayaa waxay Barcelona, ka caawiyeen inay kaga gaaraan Camp Nou dhigooda Athletic Bilbao guushoodii 25aad oo xiriir ah fasal ciyaareedkan horyaalka La Liga, ee wadanka Spain, caawa oo Axad ah.
Goolka furitaannka oo uu dhaliyay ciyaaryahan Alcacer, ayaa wuxuu yimid daqiiqadii 8aad ee qeybta koowaad iyadoona Leo Messi, uu dhaliyay goolkiisa daqiiqadii 30aad ee isla Bogga koowaad ee ciyaartaan ay iska baashaaleysay Bluagrana.
Guushaan ayaa sidoo kale, waxay uga dhigan tahay Barca, inay ku qabaneyso hogaanka horyaalak 78 dhibcood iyadoona ka horeysa Atletico Madrid oo kaalinta labaad ku jirta 11 dhibcood, inkastoo ay caawa la dheeleyso kooxdan Villarreal.
Lionel Messi ayaa wuxuu dhaliyay goolkii 25aad ee xili ciyaareedkan uu ka dhaliyo horyaalka La Liga, ee wadanka Spain, wuxuuna umuuqdaa mid kusii dhawaanaya ku guuleysiga kabtanta Dahabka ee gooldhalinta horyaalka labaad ee aduunka ugu xiisaha badan
Bedalka La Adeegsaday: Iniesta (6), Vidal (6), Gomes (6).
Bedalka La Adeegsaday: Iturraspe (7), Williams (6), Aduriz (6).
Xidigii Garoonka Ugu Fiicnaa: Lionel Messi
Messi oo qeybta koowaad ee ciyaartaan ahaa kabtanka Barca, ka hor inta uusan bedal ku imaan Andres Iniesta, oo lagu bedalay Osman Dembele, ayaa waxaa uu ciyaartaan ka kensaday qiimayn fiican, taasoo ka dhigeysa midkii ciyaarta ugu fiicnaa.